10 ịmata nke Paris ga-ahapụ gị ikwu okwu | Akụkọ Njem
Monica sanchez | | General, Paris, Ihe ị ga-ahụ
Paris bụ obodo nwere ọtụtụ iji nye. Ebe jupụtara na amara nke ịlafu onwe gị na igwe mmadụ ma ọ bụ ihe ncheta dị egwu nke na-achọ isi obodo ahụ mma, ebe ị na-ekpori ndụ ihu igwe na-atọ ụtọ n'afọ niile.
Na mpaghara nke 105 square kilomita, na ọtụtụ ebube ị ga-ahụ n'akụkụ ọ bụla, n'ezie 10 ịmata nke Pihe na m ga-agwa gị, ị maghị ha.
1 Otu akụkụ nke Egypt na isi obodo
2 E nwere ihe oyiyi atọ nke nnwere onwe!
3 Maka nri ụtụtụ, nri na chiiz. Na maka nri ehihie, na maka nri abalị ...
4 Nwere ike iche Paris na nnukwu guillotine?
5 Obodo Latin, ebe kachasị ikuku
6 Kilometa efu, na square nke Notre Dame
7 Paris zere inwe mpaghara 13
8 Mgbago steepụ nke Louvre Museum
9 Ihe omimi nke Katidral Notre Dame
10 Ekele, nka
Otu akụkụ nke Egypt na isi obodo
Louvre Museum Pyramid bụ nke onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ bụ Ieoh Ming Pei mere ya, e wee malite ya n’afọ 1989. O nwere elu nke 20,1m na ngụkọta nke ogwe iko e ji laminated 673. Site na ịdị arọ nke tọn 180, n’ime ọ̀tụ̀tụ̀ ihu igwe yiri nke ahụ e debanyere na pyramid nke Cheops, n’Ijipt: 51 Celsius. Ihe bụ ihe ọzọ, nwere otu akụkụ.
E nwere ihe oyiyi atọ nke nnwere onwe!
Ihe kacha mara amara dị na United States, na ndịda nke agwaetiti Manhattan, mana e nwere ihe abụọ dị na France: otu na Colmar, nke ewepụtara na 2004, na nke ọzọ na Paris. na Swan Island. Nke a bụ nke onye omenkà Italy-French bụ Auguste Bartholdi haziri, wee hiwe ya na July 4, 1889.
Maka nri ụtụtụ, nri na chiiz. Na maka nri ehihie, na maka nri abalị ...
Ọ bụrụ n’onụtụwo nụ mmadụ kwuru na ndị Parisi na-ata achịcha na chiiz kwa ụbọchị ma ị kwenyeghị, ị mehiere. Maka ha, nri abụọ a bụ isiNke mere na ha soro iwu siri ike inweta baguettes na cheese kacha mma. Ma lee ka esi mee ha nke ọma ...!
Nwere ike iche Paris na nnukwu guillotine?
Ọ fọrọ obere ka ha wuo ya. Ma ọ bụ na, maka Ngosipụta Universalwa Nile nke 1889, a na-eme asọmpi iji mepụta nnukwu ọrụ, nke ga-abụrịrị akara ụkwụ nke obodo ahụ. N'ime amụma ndị ọzọ, nke ahụ bụ nke rụọ 274 mita elu guillotine, iji na-echeta onyinye France nyere na omume a. N'ụzọ dị mwute, na njedebe, e kpebiri iwu Towerlọ Eiffel, nke na-enweghị ihe ọ bụla na-akpasu iwe ma nwee ike ịnya isi na ịnwe uru dị elu.
Obodo Latin, ebe kachasị ikuku
Ọ dị na ndịda nke delọ de la Cité, ma bụrụkwa otu n’ime agbata obi kacha dịrị ndụ. N’oge ochie, ọ bụ ụmụ akwụkwọ na-asụ Latịn bi na ya. A ghaghi ikwu na nke a bụ otu n'ime ebe ọkụ n'oge mgbanwe mgbanwe nke 1968, ọ bụ ezie na taa ọ bụ agbata obi dị jụụ, nwere ụlọ oriri na ọ pleasantụ pleasantụ mara mma na ụlọ oriri na ọ pleasantụ thatụ na-agba gị ume ịnọdụ ala.
Kilometa efu, na square nke Notre Dame
Ọ bụghị ebe etiti France, mana ọ bụ nke Paris. site na nke a, site na Point Zéro na ha na-akpọ ya, ị nwere ike gbakọọ ogologo ụzọ niile dị n’obodo ahụ. Na mpaghara a na-ekwukarị na ọ ga-abụrịrị na ndị zọsiri ụkwụ ga-alaghachi, ebe ọ bụ na ọ ga-adịrị ha mma iso ha nọrọ n'oge a.
Anyị amaghị ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị, mana ebe ahụ mara mma.
Paris zere inwe mpaghara 13
Nọmba 13 bụ (ma ọ bụ, taa, site n'ọtụtụ ọdịbendị) tụlere ọnụọgụ ọjọọ. N'oge mgbanwe mgbanwe nke French nke 1795, 12, na nkewa 48, mana ha achoghi iguzobe ozo ka ọ ghara ịbụ na obodo ahụ ga-ada site na amara. Ihe doro anya na emeghị, n'ihi na taa ọ nwere mpaghara 20 ma dị ndụ karịa mgbe ọ bụla.
Mgbago steepụ nke Louvre Museum
Na Louvre Museum anyị nwere ike ịhụ ma jiri steepụ gburugburu mara mma. Mana, ị maara na e nwere ụdị dị iche iche na ha nwere ọrụ dị iche iche? Ha bụ ihe dị iche iche na-adọta mmasị dị ukwuu, nke mere na onye ama ama ama amaala ụlọ were afọ 10 mụọ ha. Ugbu a, ọ rụọla ọrụ dị egwu, nke ọ na-akọ akụkọ ya, mkpa ha nwere, ihe kpatara ihe ịga nke ọma ya, na ọtụtụ ndị ọzọ. Maka ozi ọzọ, anyị nwere ike ikwu na ị na-agụ Usoro mmụta doctoral nke onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Alberto Sanjurjo.
Ihe omimi nke Katidral Notre Dame
Ọ bụ katidral Gothic a ma ama n'ụwa, yana ihe ncheta kachasị eleta na Paris. Can nwere ike ịchọta ya na Ile de la Cité, ebe ogwe aka nke na-ewepu mmiri n'elu ụlọ, nke ekwenyere na ha tetara n'abalị ahụ ọkụ Joan nke Arc na osisi.
O zughi ịsị Bonjour ma ọ bụ Bonsoir (dị ka ikpe nwere ike ịbụ) n'olu ụda nkịtị, kama kama na-eme ọtụtụ ihe nke mere na ọ na-abịa dị ka eke dị ka o kwere mee. Ndị Parisi hụrụ asụsụ ha n'anya, yabụ ọ bụrụ na ị kelee ha nke ọma, ebe ọ bụ na izu oke zuru oke adịghị - ekele zuru oke, ana m agwa gị na ị ga-enwe mkparịta ụka gị na ha karịa.
Paris bụ obodo ebe idafu bụ ihe na-atọ ụtọ mgbe niile, ọkachasị mgbe ị gụsịrị ọchịchọ ịmata ihe ndị a, ị naghị eche?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Paris » Curiosities nke Paris ga-ahapụ gị ikwu okwu
Gaa Krakow, ihe ị ga-ahụ n'obodo